MW Saciid Deni iyo wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray magaalada Kismaayo - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home News MW Saciid Deni iyo wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray magaalada Kismaayo
MW Saciid Deni iyo wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray magaalada Kismaayo
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo wafdi uu hoggaaminayo aya soo gaaray magaalada Kismaayo si ay uga qeyb galaan caleema saarka MW. Axmed Madoobe
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo maalmahaan waday inay joojiso inaysan Siyaasiyiin ka qeyb-gelin xaflada Caleema saarka ayaa ku guuleysan weysay inay Madaxweyne Deni ku qanciso in uusan ka qeyb-gelin xafladaas.
Wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya kana soo jeeda deegaannada Puntland ayaa tegay Magalada Boosaaso ee Gobolka bari,kuwaas oo Madaxweynaha Puntland kala hadlay in uu ka baaqsado Xaflada Caleemo saarka,hayeeshee la sheegay in taasi uu diiday.
Wararka laga helao saaka Magalada Boosaaso ayaa waxaa ay sheegayaan in Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni uu Maanta oo Arbaco ah ku wajahan yahay Magaalada Kismaayo si uu uga qeyb-galo Xaflada Caleema saarka Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam.
Si kastaba horay Magaalada Kismaayo waxaa ugu sugnaa Madaxweynayaashii hore ee Galmudug & Koonfur Galbeed, Cabdi Kariin Xuseen Guuleed & Shariif Xasan Sheekh Aadam,waxaana la filayaa inay siyaasiyiin kale ku biiraan.
Next articleGuddoomiyaha Aqalka Sare oo farriin Culus u diray Madaxda Dowladda